यस कारण रवि लामिछानेको भिडिओ न्यूज २४ टेलिभिजनले काट्यो – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यस कारण रवि लामिछानेको भिडिओ न्यूज २४ टेलिभिजनले काट्यो
काठमाडौं । चर्चित टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडेसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम विवादमा परेको छ । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम प्रशारणलाई न्यूज २४ टेलिभिजनले जारी राख्ने बताइरहेका बेला रवि लामिछानेले पनि सोही कार्यक्रम गर्ने भन्दै आफ्नो गुनासो टिपाउन सम्पर्क नम्बर सार्वजजिक गरेका छन् ।
गत बिहीबार लामिछानेले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडेका थिए । बिहीबार न्यूज २४बाट रवि बाहिरिएसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’को कपिराइट विवाद हुने देखिएको हो । बिहीबार न्यूज २४ बाट बाहिरिँदै गर्दा लामिछानेले आफूले तयार पारेको भिडिओ रिपोर्ट न्यूज २४ ले काटेर प्रशारण गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । यसपछि लामिछानेका समर्थकहरु आक्रोशित भएका थिए ।
यही बेला हिजो शनिबार लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम गर्ने तयारीमा जुटेको र यसैका लागि प्रदेश १ जाँदैछौँ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।
ओली र प्रचण्डले सम्झिएका को हुन् कालीबहादुर खाम ? ओली र प्रचण्डले सम्झिएका को हुन् कालीबहादुर खाम ?
यसपछि सिधा कुरा जनतासँगको प्रतिलिपि अधिकारको विवाद हुने देखिएको हो । तर, यसको प्रतिलिपि अधिकार न्यूज २४ टेलिभिजनसँग रहेको सो टेलिभिजनका महाप्रबन्धक सुधीर राजभण्डारीले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए ।
रवि लामिछाने टेलिभिजनको विशिष्ट पदका कर्मचारी रहेको र उनी बाहिरिए पनि ‘सिधा कुरा जनतासँग’को प्रतिलिपि अधिकार टेलिभिजनसँगै रहने उनले बताए ।
न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ साताको तीन दिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार पौने ९ बजे प्रसारण हुने गरेको छ । र आज (आइतबार) पनि प्रशारण हुने महाप्रबन्धक राजभण्डारीले बताए ।
लामिछाने र टेलिभिजनबीच कुनै विवाद नरहेको जानकारी दिएका महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘अहिले पनि रवि लामिछाने र टेलिभिजनबीच कुनै विवाद छैन । राम्रो सम्बन्ध छ ।’
रवि लामिछाने ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउने तयारीमा छन् के गर्नु हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिले चलाइसक्नु भएको छैन । यस कारण यसबारे केही बोलिरहनु परेन । यदी चलाउनु भयो भने त्यही अनुसारले कुरा गरौँला ।’
यस कारण काटियो भिडिओ
गत बिहीबार न्यूज २४ टेलिभिजनबाट बाहिरिँदै गर्दा रवि लामिछानेले आफूहरुले बनाएको भिडिओ टेलिभिजनले काटेर प्रशारण गरेको गुनासो गरेका थिए । तर, उनले सो भिडिओ काटिनुको कारण भने जानकारी गराएका थिएनन् । यसपछि लामिछानेका समर्थकहरुले टेलिभिजनविरुद्ध आक्रोशित भएका थिए ।
उनको भिडिओ काटनुमा टेलिभिजनलाई जानकारी नदिई बाहिर बनाएर ल्याइएको कारण रहेको न्यूज २४ टेलिभिजनका महाप्रवन्धक सुधीर राजभण्डारीले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए ।
‘हाउसलाई जानकारी नदिई बाहिर बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ । जानकारी नदिइ बनाइएको कारण सो भिडिओ काटिएको हो’, उनले भने ।
सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका युवकको मृत्यु